Piaggio P-166 စုဆောင်းမှု FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
Size: 50.3 ကို MB
ဒီအထုပ်တွင်ဇာတိပါရှိသည် FSX FS-166/2002 အတွက်တီထွင်ထားသောမူလ Piaggio P-2004 မော်ဒယ်များကိုပြောင်းလဲခြင်း ဗားရှင်းအားလုံးပါဝင်သည်။ P-166A, P-166BL-2, P-166CL-2, P-166M, P-166S, P-166DL-3 နှင့် P-166DP-1. လီဗာပူး ၃၂ ခုနှင့် virtual cockpit ပါ ၀ င်သည်။ အဘယ်သူမျှမ 32D panel ကို), ကိုယ်ပိုင်အသံ, လက်စွဲစာအုပ် (... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Mario Noriega မှဒီဇိုင်းနှင့်အနုပညာလက်ရာများ
လေယာဉ်ထွန်စက် AT-802 Fire Boss FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
Size: 193 ကို MB
ဒီ Tractor AT3 "Fire Boss" ၏ 802D ဗားရှင်းသည် Flight Sim Nation Development Group ကိုစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်လုပ်ဆောင်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုဗားရှင်းကို BETA ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်တွင်စွန့်ပစ်လိုက်ပြီ အဆိုပါ add-on သည်ယခု Freeware ဖြစ်သည်။ ဤအထုပ်တွင် AT802 ကုန်းရေဖြင့်ဖြန့်ကျက်သော mod နှင့်ပါ ၀ င်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Flight Sim Nation ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့။ Virtual Over Italy မှတင်ပြသည်။ N801NC InDeepSchit မှပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်။ က Nicholas Mitchell ကထပ်ဆင့်ပြင်ဆင်မှုများ။
Breguet 941 S က FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
Size: 56.4 ကို MB
Patrick Le Luyer မှပုံစံပြုထားသော“ Bréguet 941 S” အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာစွာကြိုဆိုသည်။ ဤထပ်ဆောင်းသည် Freeware တွင်လက်ရှိတည်ရှိသည့်Bréguet 941 S ဖြစ်သည်။ စာရေးသူအားသူ၏တီထွင်မှုကို Rikoooo အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်မျှဝေခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အခန်းနှင့် virtual cockpit, 2D panel, personali ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ပက်ထရစ်သည် Le Luyer
GAF ခြေသလုံး 22B FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
Size: 52.4 ကို MB
ထူးခြားသောထပ်ဆောင်းထည့်သွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည် GAF Nomad 22B သည်အင်ဂျင်နှစ်လုံးပါသောတာဘိုရော့ပ်၊ တောင်ပံ၊ တိုတောင်းသောလေယာဉ်နှင့်ဆင်းသက်ခြင်း (STOL) လေယာဉ်ဖြစ်သည်။ 172 လေယာဉ်ကိုသြစတြေးလျအစိုးရလေယာဉ်စက်ရုံများ (GAF) မှတည်ဆောက်ပြီး 1975-85 ကာလတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤပုံစံကို "ပျံသန်းသော ... " မှသူများအပါအ ၀ င်3liveries တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Ivo Verlaeckt
L-410 Turbolet ကွစို့ FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 171 ကို MB
Pannon Wings ဒီဇိုင်းအဖွဲ့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအလွန်ကောင်းတဲ့စေ L-410 ထို့နောက်၏ဇာတိ format ကိုပြောင်း FSX Bluebear နှင့် Falcon409 ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မျိုးကွဲခြောက်ခု (L-410UVP, L-410UVPE, L-410UVPT, L-410FG, L-410NG နှင့် L-410UVP PARA) နှင့် ၂၃ မျက်နှာပြင်ပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင်သဟဇာတ Prepar3D v4.The Let L-410 Turbolet i ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Pannon Wings ဒီဇိုင်းအဖွဲ့။ FSX Bluebear VC ကို retexturing, ပစ္စည်းတိုးမြှင့်မှုများနှင့်အစားထိုး gauge ခြင်းဖြင့်အားဖြင့် native ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အစားထိုး gauge ။ Ed ကဝဲလ် (Falcon409)
Sukhoi SuperJet SSJ-100 FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 15 061
Size: 39.2 ကို MB
ဤတွင် Rikoooo သည့် Sukhoi SuperJet 100 ဇာတိအပေါ်သီးသန့်ဖွင့် FSX နှင့် Prepar3D v4 ။ ဒါဟာ Rikoooo FS2004.Specificities ဘို့မူလကခဲ့သောဤမော်ဒယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည် Edgar Guinart ဇျ (AEROPROYECTO) ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်: ဒီအထုပ်၏သောက virtual ယာဉ်နှင့်အတူထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ AEROPROYECTO (Edgar Guinart ဇျ), ဇာတိ FSX/P3D Rikoooo အားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း
အင်္ဂလိပ်လျှပ်စစ်ကင်ဘာရာ B-57B FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
Downloads:7720
Size: 69.5 ကို MB
Alphasim / Virtavia အားဖြင့်လုပ်ပါတယ်ထိပ်တန်းကင်ဘာရာ B-57 ထို့နောက်ဇာတိကူးပြောင်း FSX 2015 အတွက် Henk Schuitemaker အားဖြင့် format နဲ့။ ဤသည် add-on 2008 အတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်း Alphasim ထံမှဟောင်းတစ်ဦး Payware ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗူးအတွက်ကိုလည်းဒန်နီ Garnier မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တချို့ကပြင်ဆင်ချက် FS နှင့်အတူ Rikoooo အားဖြင့်ကြပြီ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Alphasim / Virtavia ခြင်းဖြင့်မူရင်းမော်ဒယ်။ FSX Henk Schuitemaker အားဖြင့်ဇာတိ MDL X ကိုကူးပြောင်း။ ဒန်နီ Garnier အားဖြင့် package
Dassault စွန်ငှက် 20E FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
Size: 65.1 ကို MB
ဒီ package တစ်ခုဟန်ပြသင်ယူခြင်းနှင့်မနိမ့် Poly မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်စာရေးသူနှင့် ပတ်သက်. ၎င်း၏လက်ရှိအသိပညာနှင့်စွမ်းရည်များအတွင်းတတ်နိုင်သမျှကြောင့်တိကျမှန်ကန်အောင်ကြိုးစားခဲ့ FSX/P3D ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ကိုယ်ကသာစံကိုအသုံးပြုသည် FSX/P3D SDK ကိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို။ များအတွက် PDF ဖိုင်ရယူရန်ကို manual (ရှေ့ပြေးမှတ်စုများ) ကိုကြည့်ပါ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Arild Elverum (Rotorhub) ကမော်ဒယ်နှင့် gauge ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ သောမတ်စ် Roehl အားဖြင့် texture နှင့်မော်ဒယ် mods ။
Beriev Be-200 ပက်ကေ့ FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
Size: 61.1 ကို MB
Rikoooo မှာရုရှားလေယာဉ်ကိုချစ်ပြီးကျွန်တော်ပင်ပန်းရတော့မှ, ဒီမှာကောင်းတဲ့အတွက် add-on သဟဇာတနှင့်အတူအခြားသူများကိုတို့တွင် Prepar3D v4 ။ Beriev Be-200 အမည်ရှိဤသည်ဗုံးကြဲလေယာဉ်ကိုထိရောက်စွာရုရှားနိုင်ငံ, ဒါပေမယ့်လည်းဂရိနိုင်ငံ, ဣသရေလအမျိုး, ပေါ်တူဂီအတွက်နွေရာသီ 2010 ၏အလွန်ကြီးမားသောသစ်တောမီးလောင်မှုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲပါဝင်ခဲ့။ Inc မှ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Philippe Wallaert အားဖြင့် Massimo Taccoli, VC ကိုလိုက်လျောညီထွေပြားများနှင့် gauge အားဖြင့်မော်ဒယ် Predatorus ခြင်းဖြင့်အသံ
Convair မော်ဒယ် 7002 XF-92A FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
Size: 250 ကို MB
ဤသည်ကား, Convair XF-1948 တစ်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်လာလို့ယူဆတယ်ဧပြီလ 92 အတွက်၎င်း၏ပထမဆုံးပျံသန်းမှုအောင်ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တောင်ပံလေယာဉ်တစ်ခုစမ်းသပ်စီမံကိန်းတွင်, ဒီ၏ 3D Model add-on ကိုကျန်ရစ်က virtual cockpit အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေးဖြစ်ပါတယ် လက်တွေ့ gauge နဲ့ 3D ကလစ်နှင့်အတူသူတော်ကောင်းတရားသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ မီလ်တန် Shupe, Rick Mackintosh, ဘရိုင်ယန် Alexson, Scott သောမတ်စ်, ပညာရှင် Hans-Joerg Naegele ဇန်နဝါရီ Rosenberg က, Nigel Richards, ဇန်နဝါရီ Visser နေဖြင့်ရှေ့ပြေးပုံ, တုရုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံက Mike ကယ်လီတို့က
တိုတောင်းသောညီအစျကိုဘဲလ်ဖတ် FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
Downloads:6892
Size: 22.5 ကို MB
အဆိုပါက Short ဘဲလ်ဖတ်တဲ့မိုးသည်းထန်စွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတော်ဝင်လေတပ်များအတွက် 10 မိတ္တူအတွက်က Short ညီအစ်ကိုများကထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွက် add-on သငျသညျဆက်ဆက်ပျံပျော်မွေ့လိမ့်မည်။ လေး repaints လည်းအတူအလုပ်လုပ်တယ်ရာ GPWS (နှင့်အတူထည့်သွင်း Prepar3D v4 +), ထုံးစံအသံနှင့် gauge, panel ကို 2d ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Philippe Wallaert အားဖြင့် VIRTAVIA, Panel များနှင့် gauge
ရော်ဘင် DR400 Regents P3Dv4 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 14 826
Size: 29.2 ကို MB
ဤသည် add-on နှင့်အတူသာသဟဇာတဖြစ် Prepar3D v4 ။ ဇာစ်မြစ်ကိုမှာဒီ add-on ၏ 3D မော်ဒယ် FS2004 (2002 Yannick Lavigne-Fred သည် Banting-ရော့လူငယ်) အတွက်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပြီးရင်၏ SDK ကိုအတူ recompiled ခဲ့သည် Prepar3D Bluebear အားဖြင့် v4, ဒါဟာ၏ဇာတိ format နဲ့ယခုဖွင့် Prepar3D t ကို၏ v4 64 bits.Very လှပသောသဘောပေါက် ... ဆက်ဖတ်ရန်
လိုက်ဖက်တဲ့ Prepar3D v5Prepar3D v4
စာရေးသူ Yannick Lavigne-Fred သည် Banting-ရော့လူငယ်တို့, P3DBluebear အားဖြင့် v4 ဇာတိပြောင်းလဲခြင်း
Ilyushin Il-76 MD FSX & FSX-Steam HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 29 105
Size: 108 ကို MB
ဒီနေရာတွင်တစ်ခု Ilyushin Il-76 MD ဖြစ်ပါသည် FSX အလွန်မြင့်မားအရည်အသွေး, ကို virtual cockpit အပြည့်အဝ 3D နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, HD, ထူးခြားတဲ့အလုပ်အတွက် gauge နှင့်အတူလုပ်ပါတယ်! FS2004 များအတွက် package.For တစ်ခုပင်ခဝါသည်ဗားရှင်းဖြည့်စွက် hereThe Ilyushin Il-76 (နေတိုးသတင်းပို့အမည်: Candid) ကိုကလစ်နှိပ်ပါ multi-ရည်ရွယ်ချက်လေးအင်ဂျင် turb ဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
Concorde RW Reworked ဗားရှင်း FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 49 742
Size: 143 ကို MB
အ Concorde (Libardo Guzman ဖွငျ့မော်ဒယ်) ၏တည်းဖြတ်မူ 2017 ခြင်း, 2D panel ကမှဖန်ဆင်းတော်အများအပြားတိုးတက်မှု, အသစ်တချို့ features တွေ, bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများ။ အပြီးအစီးပက်ကေ့ (မော်ဒယ် + VC ကို + Panel ကို 2D + အသံ + Repaint Air ကိုပြင်သစ်နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံလေကြောင်းလိုင်း) အပြောင်းအလဲများနှင့် instru ၏ပြီးပြည့်စုံစာရင်းများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ဂရုတစိုက် more ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Libardo Guzman, Dietmar Loleit, Philippe Wallaert, ယောဟန် Honniball, ချားလ်စ် Owen, Kelvin Keeble, Andiroto အားဖြင့် update ကို
Dassault စွန်ငှက် 50 FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 39.1 ကို MB
ပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖြင့်အပြည့်အဝစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူတစ်ဦးကလှပသောစွန်ငှက် 50,6(CAEA, အိမ်, ဘဝကအခမ်းအနားကျင်းပ, ကနေဒါတပ်ဖွဲ, အဏ္ဏဝါပြင်သစ်Aéronavale, ကုန်မာဆိုင်ပိုင်ရှင် Soh) repaints တစ်အသေးစိတ် VC ကို, 2D panel က, 3D အခန်း, ထုံးစံအသံ, Animation မြေပြင်နှင့်အများအပြားပါဝင်သည် အခြားအရာများ။ တစ်ဦးက Fal မဆိုအပျော်တမ်းအဘို့ရှိရမည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Yannick Lavigne, Fred သည် Banting, ရော့လူငယ်အဲရစ် Dante နေဖြင့်ထပ်တိုးကမော်ဒယ် FSX Bluebear (Postbaer61) ကဇာတိ
Add-on version 1.2 + အသစ်ပြောင်းခြင်းများ